Windows7မှာ Software တွေ Install လုပ်တဲ့အခါ NSIS Error ( Error Launching Installer ) ဖြေရှင်းနည်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Windows ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ Windows7မှာ Software တွေ Install လုပ်တဲ့အခါ NSIS Error ( Error Launching Installer ) ဖြေရှင်းနည်း
Windows7မှာ Software တွေ Install လုပ်တဲ့အခါ NSIS Error ( Error Launching Installer ) ဖြေရှင်းနည်း
Maung Pauk at 11:49:00 AM Windows ဆိုင်ရာ, နည်းလမ်းများ,
Cbox မှာ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က မေးထားလို့ပါ.. အချို့ Software တွေကို Install လုပ်တဲ့အခါ ISIS error ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ Error Launching Installer ဆိုပြီး Install ဆက်လုပ်လို့မရတော့တဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်..
ပထမဆုံး ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို သိသလောက် နည်းနည်း ရှင်းပြချင်ပါတယ်..
1. Internet က Download လုပ်တဲ့အခါ Connection ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် file ဟာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အပြည့်အစုံ Download မရခြင်း၊
2. Download လုပ်လိုက်တဲ့ဖိုင်ကို အရင်ရှိနှင့်ပြီးသားဖိုင်က Modified လုပ်လိုက်ခြင်း၊
3. မိမိ Computer ဟာ Virus ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံထားရခြင်း
4. Install လုပ်တဲ့ ဖိုင်စနစ် ပျက်စီးနေခြင်း
5. တကယ်လို့ Media Device ဖြစ်တဲ့ CD/DVD, Storage Device တစ်ခုခုကနေ Install လုပ်လို့မရတာဆိုရင် အဲဒီ Hardware က ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ခြင်း.. စတဲ့ ပြဿနာများကြောင့် Error Launching Installer ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်.. ဒီအချက်တွေဟာ Microsoft က တရားဝင်ရှင်းပြထားတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေပါ..
တကယ်လို့ ဖိုင်တွေက ကောင်းတယ်.. Download လုပ်တုန်းကလည်း အပြည့်ပဲ.. Virus လည်း မထိထားဘူး..ဆိုရင်-
1. Install လုပ်မရတဲ့ဖိုင်ကို တစ်ခြားတစ်နေရာဆီကို Copy ကူးယူလိုက်ပါ.. ဥပမာ- E: မှာ ထည့်ထားတာကို Install လုပ်မရဘူးဆိုရင် D: ဆီကို ကူးယူလိုက်ပါ.. Partition ကွဲပါစေ.. ပြီးရင် Install လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ..
2. နောက်တစ်နည်းက ဖိုင်ကို C: အောက်ကို ကူးထည့်လိုက်ပါ.. ပြီးရင် နာမည်ကို Space Bar မခြားဘဲ တစ်မျိုးတည်းရအောင် Rename ပေးလိုက်ပါ.. ဥပမာ Free Cleaner.exe ဆိုပါစို့.. FreeCleaner.exe ဖြစ်အောင် နာမည်ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်..
ပြီးရင် Start ထဲက cmd လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ.. CMD ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်..
CMD ထဲမှာ cd\_ လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ.. C:\_> ဆိုပြီးပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်..
CMD ထဲမှာပဲ name.exe\_NCRC လို့ရိုက်ထည့်ပါ.. name ဆိုတာ ကိုယ် Install လုပ်မယ့် Software နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်.. ခုနက ဥပမာအဆက်နဲ့ပြောရရင် FreeCleaner.exe\_NCRC ပေါ့ဗျာ.. CMD ထဲမှာတော့ C:\_>FreeCleaner.exe\_NCRC ပေါ့.. Enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ Installer ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်.. ဒါဆိုရင် ပုံမှန် Install လုပ်သလို ဆက်လုပ်သွားလို့ရပါပြီ...
1. Internet က Download လုပ်တဲ့သူဆိုရင် Browser မှာ Cache တွေကို ရှင်းပေးထားရပါမယ်..
2. Antivirus တွေကို အမြဲတမ်း Update ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါ.. စစ်ဆေးပါ..
3. တကယ်လို့ Download လုပ်လိုက်တဲ့ဖိုင်ဟာ လိုချင်တဲ့ဖိုင်ဖြစ်ပေမယ့် Antivirus က လက်မခံတဲ့ဖိုင်မျိုးဖြစ်နေရင် Antivirus ကို ခဏ ပိတ်ပြီးမှ Download လုပ်ပါ.. ဥပမာ - Keygen တွေကို ဒေါင်းတဲ့အခါ Antivirus က ဖျက်ပစ်တတ်ပါတယ်..
4. CD/DVD Drive တွေ ကောင်းမွန်နေပါစေ..
အဆင်မပြေရင် ပြောပါ.. အဆင်ပြေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပေးပါမယ်... အဆင်ပြေရင် ကြော်ငြာလေး တစ်ချက်လောက်တော့ Click ပြီး ဝင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်..
Windows ဆိုင်ရာ, နည်းလမ်းများ
Windows ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ
Anonymous September 19, 2013 at 2:25 AM
ဒီ နည်းက ပိုလွယ်မယ်ထင်ပါတယ်....>>>> http://www.winkabarkyaw.net/2012/09/error-launching-installer.html
မောင်ပေါက် September 19, 2013 at 11:48 AM
ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ.. ကျွန်တော်က အဲဒါမျိုးကို 1 မှာပြထားပါတယ်.. အဲဒီနည်းနဲ့မရရင် လုပ်ဖို့ ဒုတိယနည်း2ကိုပါ ထပ်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
Zemana AntiLogger - v1.9.3.505
Windows SeVen Super XP 2013 (32bit edition) (644MB)
iOS7မှာ ကိုယ်လက်မခံချင်တဲ့ phone call နဲ့ massag...
မိမိကွန်ပျူတာရဲ့ CPU နဲ့ Memory
MyanPay မှငွေများကို မိမိရဲ့ မြန်မာဘဏ်Account ထဲသိ...
Click တစ်ချက်တည်းနဲ့ Root လုပ်လို့ရတဲ့ One Click Root
Ontrack EasyRecovery Enterprise v11.0.2.0 Full
CDMA ဆိုတာဘာလဲ။ WHAT IS CDMA ?
ကားကောင်းကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက် Window7Lambogini...
Android အတွက် စွယ်စုံသုံး Android Tuner v0.11.2 A...
Basic Knowledge of KVM Switching
Window Phone မှာ Offline Map အဖြစ်အသုံးပြုနည်း
Windows Phone တစ်လုံးကို Backup & Restore ပြုလုပ်ပုံ
Samsung Galaxy Note3တွင်ပါဝင်သည့်အချက်များ
Battery မကောင်းသည့် Window ဖုန်းတစ်လုံးတွင် Barrer...
CPU Monitor Software
1- Mobile Market v 3.9.3
Windows Galaxy XP (x86) (608 MB)
ကွန်ပျူတာဖြင့်ရုပ်သံ တည်းဖြတ်နည်းလက်စွဲ (မြန်မာလို)
Window 8 မှာ အရင် Control Panel အဟောင်းပုံစံကို De...
အသုံးမပြုလိုတော့ Web Account များကိုဖယ်ရှားခြင်း
Samsung Galaxy Nexus I9250 4.3 ကို Root လုပ်မယ်
Windows7မှာ Software တွေ Install လုပ်တဲ့အခါ NSIS...
ကာရာအိုကေစာတန်းထိုးနည်းကို Sony Vegas Pro 12 နဲ့ြ...
နေ့စဉ်သုံး မိသားစု ဟင်းချက်နည်းအမျိုးမျိုးစာအုပ်
နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းတွေကို မြန်မာစာတန်း အမြန်ထိုးကြမယ်
အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကိုယ်ကာယအလှ ကိရိယာလွတ် ၆လ လေ့...
Ulead Video Studio6Video Editing စာအုပ်
သိပ္ပံနည်းကျ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ (ပထမပိုင်း) စာအုပ်
အလုပ်ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားလုပ်ရန် စဉ်းစားရမည့...
Cmaera အတွက် အသစ်ထွက် app Snap Camera HDR version3...
TuneUp Utilities 2014 ကို Full Version ယူပါ..
Laptop ကွန်ပျူတာပြုပြင်နည်းနှင့် သိသင့်စရာများ စာအ...
Huawei G610-U00 အတွက် CWM recovery သွင်းနည်းနဲ့ St...
VRoot ကို တရုတ်စာတွေနဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းေ...
ဗေဒင်ပညာစိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် တားရော့ဟောနည်း
Rooting Huawei Ascend P6
Samsung S GTS-5570 ရဲ့ Firmware ပါ (Free download)
Samsung S3 GT-I9300 ရဲ့ Firmware ပါ (Free download)
GSM / CDMA800 တို့ရဲ့အင်တာနက် Setting ကိုခလုပ်တစ်ခ...
ဆရာလွတ် အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်း Vol3(17MB)
Window တွေအများကြီးကို ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းမှာတင် ...
ဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲ( The Way To Translation)
BMI Calculator For PC (မိမိကိုယ်ကို ပိန်လား၊ ၀လား ...
မြန်မာအမျိုးသမီး - စောမုံညင်း
အင်တာနက်မှာ မိနစ် 20 အချိန်ပေးပြီးငွေရှာနည်း နှင့်...
ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ ဦးနှောက်တွင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံပါ - သု...
လင်္ကာဒီပချစ်သူ ဝတ္တုစာအုပ် - ချစ်ဦးညို
ဓါတ်ပုံတွေကို Preview လုပ်တဲ့နေရာမှာ သိပ်ကောင်းတဲ့...
ကွန်ပျူတာကို အလှဆင်ပေးမယ့် Winter 3D screensaver
Mouse Right Click list ထဲတွင် software မသုံးဘဲကိုယ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ မင်းခိုက်စိုးစန် နဲ့ ချစ်ဦးည...
Samsung Galaxy Y (GT-S5360) ရဲ့ Firmware ပါ (Free ...
Window 8 Pro အသုံးပြုချင်သူများအတွက် Windows 8 Pro...
Desktop Icon Zawgyi font မပေါ်ရင် လုပ်နည်း..